चीनका ‘मास्क व्वाई'
एजेन्सी । चीन एक जना बालक एकाएक भाइरल भएका थिए । कारण उनको दुईवटा अनुहार भएको जस्तो देखिन्थ्यो । चीनको दक्षिणी हुनान प्रान्तमा जन्मेका हुइकाङ नाम गरेका बालकका ‘दुईवटा अनुहार’ जस्तो देखिएपछि उनी एकाएक भाइरल भएका थिए ।
उनको मुखको दुवैतर्फबाट कानसम्म खाल्डो परेको छ जसले गर्दा एउटा अनुहारमा अर्को अनुहार खप्टिए जस्तो वा अनुहारमा मुखुन्डो लगाएजस्तो देखिन्छ ।
यो एउटा दुर्लभ प्रकृतिको विकृति हो । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरुले हुइकाङलाई ‘मास्क व्वाई’ को उपनाम दिएका थिए ।
सन् २००९ को मार्च ४ मा उनको जन्म भएको थियो ।
सन्तानप्राप्ति हुँदा खुसी भएकी आमा पहिलोपटक छोराको अनुहार देख्दा भने झस्किएकी थिइन् ।
डाक्टरहरु पनि आमालाई बच्चा देखाउने कि नदेखाउने दोधारमा रहेका थिए । तर, आमाको मन न हो किन थामिन्थ्यो । जसरी पनि हेरेरै छोडिन् ।
लियाङ्सी पहिलो पटक बच्चाको अनुहार हेर्दा भक्कानो फुटेको बताएकी थिइन् । धेरैले उनलाई बच्चा फ्याक्न पनि सुझाव दिएका थिए । तर, एउटी आमाको मन कसरी मान्थ्यो ?
छोराको उपचारका लागि उनले कुनै कसर बाँकी राखिनन् ।
सर्वसाधारण जनताबाट केही आर्थिक संकलन भएपछि २०१० मा हुइकाङको शल्यक्रिया गरियो । त्यसको लागि ४ लाख यूआन खर्च भएको थियो ।
सैनिक अस्पतालमा १९ मे र १ सेप्टेम्बरमा उनका दुई शल्यक्रिया गरिए । दुवै शल्यक्रियामा संलग्न डा. डुक्वानले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा शल्यक्रिया सफल भएको बताएका थिए ।